बदलिँदो अस्वस्थकर जीवनशैली नै हृदयघातको मुख्य कारण — डा. रेग्मी – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
बदलिँदो अस्वस्थकर जीवनशैली नै हृदयघातको मुख्य कारण — डा. रेग्मी
अन्तर्वार्ता मुख्य समाचार विषेश समाचार
अस्वस्थकर जीवनशैली र सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले अचानक मुटु बन्द हुने अर्थात् कार्डियाक अरेस्टको समस्या बढ्दै गएको छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता विभिन्न कारणले कार्डियाक अरेस्ट हुने समस्या देखिए पनि ह्दयघातलाई चिकित्सकले यसकाे प्रमुख कारण मानेकाे छ । नेपालको कुल जनसंख्याको करीब २० प्रतिशतलाई मुटु सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या रहेको नेपाल ह्दय रोग निवारण प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क छ । यसै सन्दर्भमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीसँग आजको खबरले कुराकानी गरेका छ । प्रस्तुत छ त्यसको अंश:
यो कार्डियाक अरेस्ट कस्तो स्वास्थ्य समस्या हो ?
यो कार्डियाक अरेस्ट भनेको मुटु रोकिने हो । मुटुको विभिन्न खतरनाक अवस्थाहरुमध्ये यो एउटा हो । खतरनाक अवस्था – मुटु एक्कासी रोकिने जसलाई कार्डियाक अरेस्ट भनिन्छ अर्को भनेको हृदयघात (हार्ट अट्याक) र मुटु फेल हुने । कार्डियाक अरेस्ट विभिन्न कारण हुन सक्छ ।
यहाँका अनुसार मुटुको विभिन्न खतरनाक अवस्थामध्ये कार्डियाक अरेस्ट एक हो, यो समस्या के कारणले निम्तन्छ ?
अहिले मुटुको विभिन्न समस्याहरु देखिएको छ । जुन हार्ट अट्याक अर्थात् ह्दयघात प्रमुख समस्या हो । कार्डियाक अरेस्ट भएर मृत्यु हुने विभिन्न कारणमध्ये हृदयघात एक प्रमुख कारण हो । चुरोट र सूर्तिको सेवन, बदलिँदो अस्वस्थकर जीवनशैली हृदयघात हुनुको मुख्य कारण हो ।
यो समस्या विशेषगरी कसलाई हुन्छ ? कुन वर्ग वा भनौ उमेर समूह यसको बढी जोखिममा हुन्छन् ?
पछिल्लो अध्ययन अुनसार यो कुनै वर्ग वा समूह भनेर हृदयघातले भन्दैन । यो सबैलाई नै हुन सक्छ । तर विशेषगरी अलि पाको उमेर ४० वर्ष उमेर कटिसकेका र अस्वस्थकर जीवनशैली जसले धुम्रपान बढी गर्छ, जसलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको समस्या छ, त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई हृदयघातको समस्या बढी हुन्छ । युवाहरु विशेषगरी ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा पनि यो समस्या छ । यदी यो समस्या उनीहरुलाई भयो भने वृद्धाहरुलाई भन्दा कडा खालको देखिएको हामीले पाएका छौ ।
त्यसो भए, पछिल्लो समय मानिसमा बढ्दो अस्वस्थकर जीवनशैली पनि यसको एक प्रमुख कारण मध्ये एक हो भन्न मिल्छ ?
एकदमै मिल्छ । अहिलेको मुटुरोगको प्रमुख कारण म त भन्छु की ८० प्रतिशत कारण नै यो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ । बद्लिदो अस्वस्थकर जीवनशैलीले गर्दा अहिले हृदयघातको समस्या बढी रहेको छ, त्यसैले कार्डियाक अरेस्ट भएर मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ ।
यो कार्डियाक अरेस्टबाट कसरी बच्न सकिन्छ ? यहाँको सुझाव के रहन्छ ?
सबैभन्दा पहिले यो चुरोट र सूर्तिको सेवन बन्द नै गर्नुपर्छ । हृदयघातको प्रमुख कारण भनेको सूर्तीजन्य पदार्थ हो । जीवनशैलीलाई स्वस्थ बनाउन स्वस्थ आहार खानु पर्छ । खानामा हरियो सागसब्जीको मात्रा बढाउने, धेरै चिल्लो, गुलियो कम खाने गर्नुपर्छ । दैनिक ३० देखि ६० मिनेटसम्म शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ । शरीरको तौललाई सन्तुलन राख्नुपर्छ । मानसिक तनाव लिनु भएन । स्वस्थकर जीवनशैली हामीले अवलम्बन गर्न सक्यौ भने सम्भावित हृदयघात, आकस्मिक मृत्यु र कार्डियाक अरेस्टबाट बच्न सक्छौं।
प्रकाशित मिति: 2019-04-17 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged कार्डियाक अर्रेस्ट प्रकाशराज रेग्मी मुटु रोग हृदयघात
रिहा लगतै विप्लव समूह परित्याग गरेको घोषणा
‘भक्तपुरको कला–संस्कृतिआदिको जानकारीका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम’
नेपाल–भारतजस्तो प्रगाढ सम्बन्ध, विश्वको कुनैपनि दुई देशबीच छैन : भारतीय राजदूत पुरी
यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि राजनले दिए मण्डलाबाट राजिनामा
एनसेल टावर आक्रमणको आरोपमा पक्राउ परेका विप्लवका कार्यकर्ता जेल चलान
Tags: कार्डियाक अर्रेस्ट, प्रकाशराज रेग्मी, मुटु रोग, हृदयघात